Daily Rashifal | आज (आइतबार) चम्किंदै छ यी ७ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस्
HomeRashifalDaily Rashifal | आज (आइतबार) चम्किंदै छ यी ७ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस्
By Internet Khabar Staff
Daily Rashifal |काठमाडाैं l १८ वैशाख २०७८ आइतबार । तद्नुसार मे महिनाको १ तारिक ।विश्व मजदूर दिवस । वैशाखशुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि, भरणी नक्षत्र, आयुष्मान योग, चन्द्रमा मेष राशिमा रहेको छ ।Check out your todays rashifal. Daily rashifal
आज बिहान सूर्योदय ५ः२५मा हुनेछ भने १८ः३७ मा सूर्यास्त हुनेछ । आजको देवता चन्द्र र ग्रहदेव केतु रहेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार विहान सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला । साताको पहिलो दिन सप्ताहन्तको कार्यायोजना तय गर्नु राम्रो हुन्छ । आज विहान ११ः३५ देखि १२ः२७ सम्मको समय अभिजित मुहूर्त रहेको छ । यो समयमा शुभकार्य गर्दा शुभ हुनेछ ।
Daily Rashifal | आजको राशिफल
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ) :
स्वास्थ्यमा समस्या सुधार हुनेछ । मनमा अनेक सोच र चिन्ता हट्दै जानेछ । यसैले मेष राशिका जातकले सकारात्मक सोच राख्नु होला । आकस्मिक संकट पनि हटने छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । आजको दिन नियमित कार्यबाहेक नयाँ कामका अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । विहानको सूर्योदयको दर्शन फलदायी हुनेछ ।
वृष (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो) :
तपाईको लागि आज अर्थलाभ हुनेछ । व्यापारबाट नसोचेको आर्थिकलाभ प्राप्त हुनेछ । शत्रुमाथि विजयप्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुनाका साथै यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला । तपाईको मनमा सकारात्मक सोच र खुसी हुने खबरले उत्साह थपिने छ ।
मिथुन (क.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह) :
स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । धनलाभ र नयाँ सुखद खबरले तपाईलाई खुसियाली छाउने छ । घर परिवार र आफन्तसँग केही विषयमा विवाद हुनसक्छ । त्यसैले आजको दिन कम बोल्ने र अर्काका कुरा सुन्ने गर्दा राम्रो हुनेछ । राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छ । आजको दिन निकै सोच विचार गरेर काम गर्नुहोला ।
See also Rashifal Today Nepali: आज शुक्रबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य,
कर्कट (हि.हू.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो) :
आजको दिन यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ भने यात्रामा सफलता मिल्नेछ । तपाईले सोच र परिवारका कुरा नमिल्दा नकारात्मक सोच आउनसक्छ । त्यसैले आजको दिन सोच विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नु होला । आज विहान सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । आजको दिन तपाईले कुनै नयाँ र शुभकार्य गर्नु लाग्नु भएको छ भने शुभ हुनेछ ।
सिंह (मा.मि.मु.मे.मो.टा.टि.टु.टे) :
सिंह राशिका जातकले आइतबारको विहान सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला । तपाईलाई अनावश्यक विवाद हुनसक्छ । आजको दिन भुलेर पनि कसैसँग विवाद नगर्नुहोला । पारिवारिक समस्याका कारण मनमा अनेक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले आजको दिन मौन रहेक आफ्नो कार्य गर्नुहोला । आजको दिन व्रत गर्नु निकै फलदायी हुनेछ ।
कन्या (टो.प.पी.पू.ष.ण.ठ पे.पो) :
छोटो दुरीको यात्रा हुनसक्छ । नयाँ मित्रमण्डलीसँगको भेटले काममा उत्साह थपिने छ । आफन्त र मित्रजनबाट साथ र सहयोगको प्रस्ताव आउनसक्छ । आजको दिन नयाँ बस्त्र खरिद गरेर लगाउन राम्र्रो हुनेछ । कुनै कन्यालाई फल र दक्षिण दिनुभयो भने तपाईलाई उनको आशीर्वादले तपाईमा सकारात्मक सोच बढ्ने छ ।
तुला( रा.री.रु.रे.रो.ता.ती.तु.ते) :
मानसिक असन्तोष र तपाईले सोच अनुसारको काम नहुँदा चिन्ता हुनसक्छ । त्यसैले मनमा सकारात्मक सोच राखेर काम गर्न आवश्यक छ । व्यापार ब्यबसायमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईलाई हानीहुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा धैर्यको आवश्यकता हुन्छ । आत्तिनु र दुःखी हुन भन्दा पनि सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नु होला ।
वृश्चिक (तो.ना.नि.नु.ने.नो.या.यि.यु) :
आज तपाईको सोच अनुसार काम हुनेछ । विहान सूर्योदयको दर्शन गरेर अघि बढ्नु होला । मनमा प्रसन्नता र उत्साह बढ्ने छ । तपाईले कुनै नयाँ कामको शुरुवात समेत गर्न सक्नुहुनेछ । आज शुरुवात गरेको कामबाट एक महिनाभित्र सफलता प्राप्त हुनेछ । लामो दुरीको यात्रा नगर्नुहोला ।
See also आज बिहीबार चम्किंदै छ यी ६ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् [दैनिक राशिफल]
धनु (ये.यो.भा.भी.भु.ध.फा.ढ.भे) :
सन्तानबाट सुख र स्त्रीजातिको साथ सहयोगले तपाईले राम्रो काम गर्नुहुनेछ । आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला । आजको दिन ब्यर्थमा समय खर्च र अनावश्यक आर्थिक भार थपिने छ । त्यसैले काम गर्दा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिन मित्रमण्डलीबाट असहयोग हुनसक्नेछ ।
मकर (भो.जा.जी.जू.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.गा.गी) :
ब्यापारबाट लाभ हुनेछ । परिवार र आफन्तजनको साथ सहयोगबाट तपाईले नयाँ काम शुरुवात गरौं भन्ने सल्लाह आउनसक्छ । सकारात्मक सोच र मनमा उर्जा थपिने छ । आफूले गरिरहेको कामबाट मानसम्मान प्राप्त हुनसक्छ । आफ्नो कर्मयात्रामा हिडिरहेकाहरुलाई नसोचेको सम्मान मिल्नसक्छ ।
कुम्भ (गु.गे.गो.सा.सी.सु.से.सो.द) :
मनमा प्रसन्नता छाउने छ । कुम्भ राशिका जातकले आजको दिन सोचअनुसारको काम र शत्रुमाथि विजयप्राप्ति हुनेछ । ब्यापारबाट प्राप्तबाट धनलाई सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुहोला । सामाजिक सेवा गर्दा मानसम्मान मिल्नेछ । तपाईलाई हौसला दिनेछन् । सामाजिक काममा मन जानेछ ।
विहान सूर्योदयको दर्शन गरेर नजिक वा देवालयको दर्शन गर्नु उत्तम छ । आजको दिन तपाईले गर्ने काममा सकारात्मक सोच आउने छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रका कार्य गर्ने मीन राशिका जातकले आजको दिन विहान सूर्यस्तोत्र पाठ गर्दा सकारात्मक सोच बढ्नेछ । तपाईले गर्न खोजेको काममा पनि सफलता मिल्नेछ ।
कति शुभ छ २०७९ साल ? हेर्नुहोस् [वार्षिक राशिफल] Rashifal– annual horoscope
Previous articleRashifal Today Nepali: आज शुक्रबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य,
Next articleAsthama Attack : दमबाट पुरुषको तुलनामा महिलाको मृत्युको सम्भावना दोब्बर,
Internet Khabar Staffhttps://internetkhabar.com
आज (मंगलबार) विशेष योगको प्रभावले चम्किंदै छ यी ७ राशिको भाग्य [दैनिक राशिफल]
आजको मौसम सम्बन्धि खबर , दिउँसो पनि हावाहुरीसहित वर्षा हुने
आज (आइतबार) चम्किंदै छ यी ६ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् [दैनिक राशिफल]
Balen Shah:काठमाडौँमा झन् अघि बढे बालेन, दोस्रोबाट तेस्रो स्थानमा झरे स्थापित
Contact us: internetkhabar@gmail.com
© Internet Khabar